thinking_talk_of_aung_thin by yephyo thu - issuu
ကို KTL (mmcybermedia.com) မှ စာရိုက်ပေးပါသည်။
အောင်သင်း၏ အတွေးစကား အိမ်ထောင်ပြုခြင်း ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ခြင်းဟာ လုပ်ဆောင်ဖယွ် ကိစ္စတော်တော်များများထဲက အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလိုက်တာပဲ။ (မြန်မာတို့ရဲ့ လူ့အဖွဲအစည်း ပြဠာန်းချက်အရ) မိန်းမတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာဟာ အရေး အကြီးဆုံး ကိစ္စတစ်ခုကို ဆောင်ရက်ွလိုက်ရတာ ဖြစ်နေတယ်။ သင့်ဘ၀၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၉၄ အသိပညာနှင့် ထ်ိန်းကွပ်သောအလှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ
မဟုတ်ဘူး။ အသိပညာသာလျှင် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ လှပတဲ့ရုပ်ရည်ကို ပညာနဲ့ကွပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ အလှဟာပိုပြီးတောက်ပြောင်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါင်းအသင်းပတ်ဝန်းကျင်ကစပြီး သတိကြီးစွာနဲ့ဆင်ခြင်နေထိုင်တယ်။ အဲဒီမိန်းကလေးမျိုးဟာ ရှားတာတော့အမှန်ပ။ဲ ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုပဲ ပြန်ပြီးလေးစားရိုသေခြင်း၊ -1-
mmcybermedia.com ချစ်ခင်ခြင်းခံရတာကတော့ အဲဒီမိန်းကလေးမျိုးတွေသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းမြီးတွေရဲ့ အလှ မျိုးဆက်သစ်
ဒေါင်းမြီးရဲ့ အလှဟာ ဒေါင်းတွေရဲ့ အသက်ကို အန္တရာယ်ပြုနေတယ် ၊
ဒေါင်းသားကိုစားချင်တာထက် ဒေါင်းမြီးကိုလိုချင်ကြလို့ဒေါင်းတွေကိုသတ်နေကြတာ မဟုတ်လား။
မိန်းကလေးတွေမှာလည်း လှရင် အဲဒီအလှဟာ အန္တရာယ်တစ်ခုလို ဖြစ်လာတက်တယ်။
ငယ်ငယ်မှာ စန်းပွင့်လွန်းရင် မအိုသေးတဲ့ သူ
လှရင် စန်းပွင့်စမြဲပေါ့ ။
ပေဖူးလွှာ၊ နိဝုင်ဘာ၊ ၈၆
ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်မှာ‘စန်းပွင’့် လွန်းရင်
ဘ၀မှာ လာဘ်တိတ်သွားတက်တာကို သတိပြုသင့်တယ်။
အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးနော်၊ မှန်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်မှာတော့ဖြင့် မျက်စိရှိရလိမ့်မယ်။
အမှားနဲ့ ခဲဖျက် အမွေ
လူတိုင်းမှားတက်ကြလို့လည်း ခဲတံတွေမှာ ခဲဖျက်တပ်ထားရတာပေါ့ ၊
ဒါပေမယ့် တချို့ အမှားတွေကခဲဖျက်န့ဖျဲက်လို့မရဘူးနော်။
စာပေထဲက လူငယ့်သမိုင်း အမွေ
မန်း၊ ဓမ္မသာလာစာပေ ဟောပြောပွဲ -2-
mmcybermedia.com ရည်းစားနှင့် ထဘီ
မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ လူငယ်ဘ၀တွင်ဖြစ်စေ၊
(နင်တို့မိန်းကလေးတွေဟာ) တစ်သက်လုံးပေါင်းရမယ့် လင်လောင်းလျာ ရည်းစားထားတာကျတော့ ထဘီရွေးသလောက်မှ အပင်ပန်းခံပြီး ရွေးပါရဲ့ လားလို့ အောက်မေ့မိတယ်။
ထဘီကျတော့ ကိုယ်န့လဲိုက်ရဲ့ လား၊ အိမ်မှာရှိတဲ့ အင်္ကျီတွေ ၊ လက်ကိုင်အိတ်တွေနဲ့ လိုက်ပါ့ မလား
မိသားစုတစ်ခု အနေဖြင့် ဖြစ်စေ ၊
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဖြစ်စေ ၊
ရည်းစားထားလိုက်တော့ ငါ့စိတ်နေစရိုက်န့သဲင့်ပါ့မလား၊ ငါ့မိဘဆွေမျိုးဝန်းကျင်နဲ့ သူနဲ့ အဆင်ပြေ
နိဗ္ဗာန်မဂ်ဖိုလ် ရရာရကြောင်း၌ ဖြစ်စေ ၊
ပါ့မလား ဆိုတာမျိုး စဉ်းစားကြပါရဲ့ လားလို့တွေးမိတယ်။
“မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ” ဟုသေသေချာချာ နှလုံးပိုက်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
(တစ်ခါတုန်းကတပည့်တွေ) ရုပ်ရှင်ကြေးမုံ အချိန် ဖြုန်းတီးမှု
အထူးသဖြင့် (ကျွန်တော်တို့လူငယ်များ) ရက်ရက်ရောရော ဖြုန်းတီးနေသည့်အရာမှာအချိန်ဖြစ်သည်။
နပိုလီယန်နှင့် မဒမ်ကင်ပန်ဆိုသောအမျိုးသမီးကြီးတို့၏အမေးအဖြေကို သွားပြီးသတိရလိုက်မိသည်။
လူငယ်တိုင်းသည် အချိန်ကိုဘယ်လောက်ပင်သုံးသုံး ထာဝရမကုန်ခန်းနိုင်သောအရာကြီးဟု အမှတ်မထင်
“ပြင်သစ်လူငယ်တွေကို မြှင့်တင်ဖို့ အလိုအပ်ဆုံးဟာဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ”
“မိခင်ကောင်းတွေပါပဲရှင”် “အောင်မလေး၊ စကားတစ်လုံးတည်းနဲ့ စနစ်ကြီးတစ်ခုပြီး သွားတာပါပဲလား ကရို့ ”
စင်စစ်အားဖြင့် အချိန်ဆိုသည်မှာ ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်အောင်ဆုံးရှုံးတက်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်း
မှန်ပါသည်။ မိခင်တွေ (အမျိုးသမီးတွေ)အသိပညာမြင့်မလာဘဲ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ မြင့်မလာ
နိုင်င၀ံန်ထမ်းအချို့ပင်လျှင်လည်း
သို့မှသာ “အမေ့သားကောင်းများ” မြောက်မြားစွာပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။
အမေ့သား သရဖူ၊ ဇူလိုင်၊ ၉၅ -3-
လူဆင်းရဲပေမယ့် စိတ်မဆင်းရဲစေနဲ့။ စီးပွားကျပေမယ့် စိတ်မကျစေနဲ့။ ချမ်းသာခြင်းဟာ သင်္ခါရပဲလို့
မှီတင်း နေထိုင်သော လူသား၊ သတ္တ၀ါအားလုံး အတွက်ဖြစ်သည်ဟု သဘောပိုက်သင့်ပါသည်။ ငွေကြေး
ပြောကြတယ်။ ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလည်း သင်္ခါရပဲဆိုတာမြဲမြဲမှတ်ထား။ နင်တို့လင်မယား အမြဲနမွ်းပါးနေမှာ
ကမ္ဘာမြေကြီးမှထုတ်ပေးလိက်ုသော
နေသူတ့သို ည်
ပိင်ုရှင်မရှိတဲ့ ခွေးလေခွေးလွင့်တောင်မှ သူ့ဘ၀မှာနေ့ကောင်းရက်သာ ရက်ရာဇာဆိုတာ ရှိစမြဲပ။ဲ
ကျေးဇူးတရားကို မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်သည်ဟု ဆိုချင်ပါတော့သည်။
ဘာမှအားမငယ်နဲ့ အခိုက်အတန့်လို့သဘောထားပြီးကြိုးစားကြ ၊ လင်မယားချင်း စကားမများအောင်နေကြ ။ စာစီစာကုံး
လူငယ်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ သိထားဖို့ (မိန်းကလေး
မိမတို့
နိုင်ငံတော်အတွက် ကဏ္ဍသစ်ဖငွ့်ရမည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခ့၊ဲ ဘယ်အခြေအနေကိုပဲ ရောက်နေနေ
လက္ခဏာက ဟောလိုက်တဲ့ အတိုင်းဆောင်ရက်ွလို့ ကြီးပွားလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုး တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးပါဘူး။
လူငယ်များ၏ နှလုံးသားတွင် ကိန်းဝပ်နေစေချင် သည်။ ဘယ်သူ့ကြောင့်၊ ဘယ်ဝါကြောင့်၊ ဘယ်စနစ်
စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလွန်းလို့ အောင်မြင်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပဲ တွေ့ရတက်လေ့ရှိပါတယ်။
ကြီးကြောင့် စသည်ဖြင့် ဟိုဟာလွှဲချ၊ ဒီဟာလွှဲချနှင့် ဆင်ခြေကန်ပြီး ယောင်ပေပေ လုပ်နေသည့်အဖြစ်မျိုးမှ
လွတ်မြောက်စေချင်သည်။ အရေးကြီးသိထားဖို့ (အမှတ်ထင်ထင်၊ ခိုင်ခိုင်မာမာကြီး သိထားဖိ)ု့ လိုအပ်သည်က
သင့်ဘ၀၊ ဇူလိုင်၊ ၉၄
လူကြီးဆိုသည်မှာ သေဖို့နီးလာသောသူများကိုခေါ်ကြောင်း(မှတ်မိနေကြဖိ)ု့ ပင်ဖြစ်သည်။ အမေ့သား သရဖူ၊ ဇူလိုင်၊ ၉၅ -4-
မကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စွဲလမ်းတွယ်တာနေမိပြီဆိုရင် . . . “ ငါဘ၀ နစ်မနွ်းဖို့သေချာနေပြီ ”
ရယ်လို့ ရဲရ၀ဲံ့ဝံ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
ဗေဒင်လက္ခဏာဆရာကို တိုင်ပင်မယ့်အစား ဗဟုသုတဥာဏ်အမြော်အမြင်ကြီးသော၊ သမာဓိလည်း
ရှိသော၊ မိမိအပေါ်တွင်လည်း မေတ္တာထားသော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတိုင်ပင်ကြည့်တာက ပိုပြီးကောင်းကျိုး သက်
အစားထိုးပြီး ဖြတ်ဖို့ နိုးနိုးကြားကြား ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
မျိုးဆက်သစ် ရဲဆေးတင်တယ် ဆိုတာ
“ရဲဆေးတင်သည် ” ဟုဆိုခြင်းထက် “ ရှက်ကြောက်ကင်းဆေးတင်သည် ” ဟုဆိုမှ ပို၍မှန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တရားစွဲလို့မရဘူး၊ ဘယ်ဗေဒင်ဆရာကမှလဲ သူ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။
ဗေဒင်နှင့် ဘ၀ရည်မှန်းချက် လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ
လူလိမ္မာတို့သည် တစ်ပါးသူ၏အမှားမှ သင်ခန်းစာကိုယူတတ်၏ ။
လုပ်ရကဲိုင်ရဲ
ဖြစ်လာတက်သောကြောင့် “ ရဲဆေးတင်သည် ” ဟုအရက်ကိုပင် ဂုဏ်တင်ပြောဆိုတက်ကြသည်။ စင်စစ်
ဗေဒင်ဆရာက တာဝန်မယူ ဗေဒင်ဟောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်လို့
လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲမှာတော့ အမြဲရောက်နေရတာမဟုတ်လား။ ဒီတော့ . . .
လူမိုက်တို့ကား ကိုယ်တိုင်မှားမှ သင်ခန်းစာကိုရကြ၏ ။
“ အပေါင်းအသင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဟာသိပ်အရေးကြီးတယ် ” ဆိုတာကို ခိုင်ခိုင်မာမာ လက္ခံထားသင့်
ပို၍မိုက်မေဲသာသူတို့ကား ကိုယ်တိုင်မှားပါလျက်နှင့်ပင် သင်ခန်းစာမယူတက်ကြကုန်။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို မကြာခဏ နိုးနိုးကြားကြားစစ်ဆေးနေသင့်တယ်။
၁။ အကြင်သူသည် မသိ။ မိမိမသိကြောင်းကိုလည်း မသိ။ ထိုသူကား လူမကိုတည်း။ ရှောင်ပါ။
ယနေ့ချမ်းသာမှုကလေးသည် တစ်သက်တာ ဆင်းရဲမှုကြီးကို ဖန်တီးနိုင်သကဲ့သို့ ယနေ့ဆင်းရဲခြင်း
၂။ အကြင်သူသည် မသိ။ မိမိမသိကြောင်းကိုကားသိ၏။ ထိုသူကား လူရိုးတည်း။ ကူညီလိုက်ပါ။
၃။ အကြင်သူသည် သိ၏။ မိမိသိကြောင်းကိုကား မသိ။ ထိုသူကား အိပ်ပျော်နေသူတည်း။ နှိုးလိုက်ပါ။
မက်မောနေလိုက်မိသော ကြောင့် ဘ၀နေ၀င်ချိန်တိုင်အောင် တစ်သက်တာလုံး ဘ၀နေပူကြီးထဲ၌ နေရသည့်
၄။ အကြင်သူသည် သိ၏။ မိမိသိကြောင်းကိုလည်း သိ၏။ ထိုသူကား ပညာရှိတည်း။ ဆည်းကပ်ပါ။
အဖြစ်မျိုးကို မည်သူမျှလိုလားမည် မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းသည် ရှေ့ ရေးကိုမျှော်ကာ ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုကို
ပေးနိုင်စမွ်းရှိချင်ရှိနေတက်သည်။
စာဖတ် ၀ါသနာ အတုလုပ်သူသည် အသစ်မထွင်နိုင်
စာဖတ်ဝါသနာကို ပျိုးထောင်လိုက်မိခြင်းသည် လူငယ်တစ်ယောက်၏ ဘ၀ကို တိုးတက်သွားစေ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အတုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချရာ၌ နာမည်ကြီးနေသော မြို့ကြီး၊
နိုင်သည်သာမက ပျက်စီးခြင်းဘေးမှလည်း ကာကွယ်လိုက်နိုင်ပါသည်။
အထင်သေးသည့်စိတ် မွေးပါ။ အတုလုပ်သောသူတို့သည် “ အသစ်ထွင် ” နိုင်သည့်အဆင့်သို့ မည်သည့်
အခါတွင်မျှ မရောက်နိုင်တော့ကြောင်းကို သတိပြုပါ။
အားလပ်ချိန်များသည် လူငယ်များအား ပျက်စီးခြင်းတွင်းဝသို့ပို့ပေးရန် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသော
ကူးတို့ဆိပ် ကြီးများသဖွယ် ဖြစ်နေတက်သည်။ စာစီစာကုံး
ယနေ့တိုင်ကျန်နေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာတည်းဟူသောရွှေအိုးကို လူမဆိုထားနှင့် မီးလည်းမခိုးနိုင်ပါ။
သတ္တ၀ါဟူသမျှ၏အသက်ကို ခိုးယူလေ့ရှိသည့် သေမင်းသော်မှမခိုးနိုင်ပါဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သီးခြားအထူးကုသိုလ်ပြုနေစရာမလိုဘဲ မိမ၀ိတ္တရားကို (ကောင်းမွန်စွာ ) ဆောင်ရက်ွလုပ်ကိုင်နေရုံနှင့် ကုသိုလ်ရနေသူသုံးဦးရှိသည်တဲ့။
(စာစီစာကုံးများနှင့် တွေးနည်း ရေးနည်း)
သင့်ဘ၀၊ ဇွန်၊ ၉၅
ကလေးကို လူကြီးလို ပြင်လိုက်ရင်
ကလေးဟာ ကလေးလိုလှမှ ချစ်စရာကောင်းတာ။ ကလေးကို လူကြီးလိုပြင်ပေးလိုက်ရင် လူကြီးလို ပညာ၏ ရည်ရွယ်ချက်
လည်း မလှဘူး၊ ကလေးလိုလည်း မလှတော့ဘူး။
အခြေခံရည်ရယ်ွချက်မှာ
သေမင်း မခိုးနိုင်သော အရာ
ပညာသည် သေခြင်းတရားကိုပင် မမှုသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ တစ်နည်းဖြင့်ဆိုသော် သေမင်းသည်
လူကိုခိုးယူနိုင်စမွ်း ရှိသော်လည်း ပညာကိုကား ခိုးယူနိုင်စမွ်းမရှိပါချေ။ သေခြင်းသဘောကို မြတ်စွာ ဘုရား
သခင်သော်မလှည်း လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရသေးသည်။ သို့သော် မြတ်စွာ
အားကြီးသည်၊ လူသည် ငါးလောက် ရေမကူးနိုင်၊ သမင်ပြေးသလောက် မပြေးနိုင်။ သို့သော် လူကဥာဏ်
ဘုရား သခင်ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူခ့သဲည့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း မင်္ဂဖိုလ်တရားပညာမူကား
ပညာကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိထက် အင်အားကြီးသော ဆင်ကိုချွန်းပေါက်ပြီး သစ်ဆွဲခိုင်းသည်။ သမင်ကို -7-
“ပညာထီ” ဟူ၍ မရှိ
တိရစ္ဆာန်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခ့သဲည်။
ယနေ့ထီပေါက်လျှင် နောက်တစ်နေ့သူဋ္ဌေးဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပညာကိုမူကား ထီပေါက်သလို မရနိုင်။ (စာစီစာကုံး)
လူကပညာကြီးသောကြောင့် တိရစ္ဆာန်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခ့သဲည်ဆိုပါလျှင်၊ လူအချင်းချင်းတွင်လည်း မှတ်ဥာဏ် နှင့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဥာဏ်
ပညာကြီးသူက ပညာနည်းသူကို လွှမ်းမိုးနိင်ုမည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ပညာကြီးသောလူမျိုးက ပညာနည်းသောလူမျိုးကို သည်ဆိုပါလျှင်၊
ဦးနှောက် စသည်ဖြင့် မျိုးစုံပေါ့လေ။ အဲဒီမှာ ထူးထူးခြားခြား ဗမာ ဦးနှောက်က ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေဆိုပ။ဲ ဒီမှာတင် လာပြီးလေ့လာတဲ့သူတစ်ယောက်က ဘာကြောင့် ဗမာဦးနှောက်က ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်နေပါသလဲလို့
ပျင်းရိခြင်းဆိုသည်မှာ လူမြင်သူမြင်အိပ်ရာပေါ်တွင် ကျောဆန့်လျက် အပျင်း “တစ်” နေခြင်းမျိုးကိုသာ ပျင်းရိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ စဉ်းစားချင်စိတ်မရှိဘဲ
မေးကြည့်လိုက်တော့ ပြပွဲတာဝန်ခံက “ဗမာဦးနှောက်က အသစ်စက်စက်ပါ၊ တစ်ခါမှ မသုံးရသေးဘူး” လို့
ရေးထားသတဲ့။ အင်္ဂလိပ် ဦးနှောက်၊ အမေရိကန် ဦးနှောက်၊ ဂျပန် ဦးနှောက်၊ တရုတ် ဦးနှောက်၊ ဗမာ
အောင်သင်း စဉ်းစားမိသမျှ “ဦးနှောက်ပျင်းခြင်း”
ရွှေ ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၉၃
ဦးနှောက်ကို အရင်းပြု၍ ရှာဖွေရသော ပညာအရာတွင် မည်သည့်အခါမျှ အောင်မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ (စာစီစာကုံး)
ပညာ လိပ်ပြာ စာသင်ခြင်းဆိုသည်မှာ
“ပညာလိပ်ပြာ နိုးလာအောင်” မလုပ်နိုင်လျှင် တကယ်အောင်မြင်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။
မျက် - ၅၀ စိတ်တက်အောင် စာကို သင်ရခြင်း
“ စာသင်ခြင်း ” ဆိုသည်မှာ“ စိတ်တက်အောင် ” စာကိုသင်ရခြင်းဖြစ်ရာ “ စိတ်တက် ” မှသာလျှင်
မည်သည့်ကျောင်းဆရာမှ တပည့်များအား တစ်သက်လုံးသုံးမကုန်နိုင်လောက်အောင် ပညာသုတကို
စာသင်ခြင်းသည် ပိုမိုအဓိပ္ပာယ် ရှိပါလိမ့်မည်။
ပေးလိုက်နိုင်သည် မဟုတ်။ ကျောင်းသာ၏ နှလုံးသားကို မွတ်သိပ်လာအောင် လုပ်နိုင်သူပင်လျှင် အတော်ဆုံး
သော ကျောင်းဆရာဖြစ်သည်ဟု “ဆာရစ်ချတ် လစ်ဗင်းစတုန်း” ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက မိန့်ဆိုခ့ဖဲူးပါသည်။
ဥဿာ - ၄
ထိုအချက်ကို ကျွန်တော် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲသဘောတူပါသည်။ ပညာမွတ်သိပ်လာသူ တစ်ယောက်သည်၊ ပညာကို သူ့ဘာသာသူ ရှာလာပါလိမ့်မည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆည်းပူးလာပါလိမ့်မည်။ သူ့ဘ၀အတွက်လည်း စိတ်ချလောက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ် ဆိုတာ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ စာတင်သင်တာမဟုတ်ဘူး၊
စာသင်ခြင်းနှင့် စိတ်သင်ခြင်း (၂)စာပေဂျာနယ်
တက်ပြီး စဉ်းစားနည်းကို မတက်ခ့ရဲင် ဘာဘွဲ့ကြီးကိုပဲ ရနေနေ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ စဉ်းစားနည်းကိုသာရခဲ့ရင် ဘယ်ဘာသာယူပြီး ဘာဘွဲ့ကိုပရဲရ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ သူများဖြစ်ရင် (တစ်ခါတုန်းက တပည့်တွေ) ကိုယ်ပိုင်
ဥာဏ်ဖံြွ့ ဖိုးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြင် ဥာဏ် ဖွံ့ဖြိုးအောင် ကြိုးပမ်းခြင်းမှာ ပညာရေးတကာတို့၏ ဦးတည်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဥာဏ်မျိုးကိုမပေးနိုင်လျှင် ဟိုလူပြောဟုတ်နိုး၊
“အမွေ” ကတော့ ပညာအမွေပါပဲ။ အဲဒီပညာအမွေမှာတောင် စာရိတ္တအမွေ ။
အရေးအကြီးဆုံးကို အကုန်ခြုံလိုက်ရင် ဘုရားဟောကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ။ ။ အမွေ (အဖြေ) -9-
mmcybermedia.com အကြောင်းကို သိခြင်း ပညာဆိုသည်မှာ ပန်းသီးကြွေလို့
အရည်အချင်း နှစ်ရပ် “အကြောင်း”
ကျွန်တော်သာ လူငယ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားပေးရမယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေကို အရည်အချင်းနှစရ်ပ်နဲ့
ပြည့်စုံအောင် သင်ကြားပေးပါ့မယ်။ အဲဒါတွေက
ကြံဆပြီး ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဆွဲငင်ခြင်းသဘောကို နယူတန်ကဖော်ထုတ်ခ့သဲည်။ ကျွန်တော်တို့ မြတ်စွာ ဘုရား သခင်သည်လည်း
ဟောကြားခဲ့သည်။ အရာရာတို့၌ အကြောင်းခံရှိကုန်၏ ဟုဟောကြားတော်မူခ့သဲည်။ ဤသို့လျှင် “အကျိုး” တစ်ခုကိုတွေ့လျှင် “အကြောင်းခံ” ကိုရှာခြင်းဖြင့် ပညာတိုးပွားအောင် ပြုလုပ်နေကြရသည်။
အနေနဲ့ သတ္တိကောင်းအောင်ဆိုတာက လက်သီးချင်း ထိုးဝံ့အောင်၊ ရိုက၀်ံ့နှက၀်ံ့အောင်၊ သတ်ရေဲသရဲ
အောင်ဆိုတဲ့ ကာယဆိုင်ရာသတ္တိမျိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ မမှန်တာကို မလုပ်ဘူး၊ မတော်လောဘ
မရှိစေရဘူး၊ စည်းစိမ်ချမ်းသာကို မတ်မောပြီး မတော်တာကို မလုပ်ဘူး၊ လျှာပေါ်မှာ မြက်ပင်ပေါက်ချင်
ဒီလှိုင်း၊ အောက်တိုဘာ၊ ၉၆
ပေါက်ပါစေတော့ မဟုတ် မတရားတဲ့နည်းနဲ့ဖြင့် ထမင်းရှာမစားဘူးဆိုတဲ့ စာရိတ္တသတ္တိမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ (၂)
သူ့ကျွန်ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်း သူ့ကျွန်ဖြစ်ခ့တဲ့ကိစ္စ
ဘာကြောင့်ဖြစ်ခ့ရဲသလဲ။
အင်္ဂလိပ်န့စဲစ်တိုက်တာ
အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်သုံးတက်အောင် လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုတာက ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ အမှားအမှန်ကို
ရှုံးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ရှုံးလဲ ။ ပညာမတက်လို့ရှုံးတာ ဒါပဲ။ ဗန္ဓုလလောက် မျိုးချစ်စိတ်ရှိဦးမလား။ ဗန္ဓုလထက်
ဘယ်သူသတ္တိကောင်းဦးမလဲ။ ဟိုက ‘ထုန်း’ ဆို (ပစ်လိုက်တော့) သေရော။ ကိုယ်ကမှ ပြန်မ ‘ထုန်း’ နိုင်ဘဲ
ရွှေ၊ သြဂုတ်၊ ၉၃
တခြားကျေးဇူးတွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ဦး ။ ကလေးမွေးဝံ့တဲ့ “သူရသတ္တိရှင”် တစ်ဦးအဖြစ်လောက်န့ကဲိုပဲ
ဘယ်လောက် အံ့သြကြည်ညိုစရာ ကောင်းနေပြီလဲ။
မွေးရာပါဦးနှောက်ချို့ယွင်းမှုမရှိရင် လူတွေဟာ ဘယ်သူ့ထက်ဘယ်သူကမှ ပိုပြီးဥာဏ် မကောင်း ကြပါဘူး။ သတ္တိကောင်းတဲ့သူ၊ သတ္တိပျိုးထောင်ရကောင်းမှန်းသိတဲ့သူ၊ ကြာရှည်ခံအောင်လေ့ကျင့်နငိုတဲ့သူဟာ
စာမေးပွဲလို အသေးအဖွဲကိစ္စမျိုးမှာသာမဟုတ် အရာရာမှာ အောင်မြင်နိုင်ကြတာပါပဲ ။ ယုံကြည်ချက် စွန့်လတွှ်ဖို့
ဦးနှောက် စိန်ခေါ်မှု လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်း ထိုးနိုင်သေးတဲ့
ဥစ္စာစည်းစိမ်အခြွေအရံ စွန့်လွှတ်ဖို့အတွက်သာ သတ္တိလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူး။
ယုံကြည်ချက်တစ်ခု (မှားတယ်လို့ထင်လာရင်) စွန့်လွှတ်ဖို့တောင်မှ သတ္တိလိုအပ်တယ်။
ကိုလက်ခ၀ံ့တဲ့သတ္တိဆိုတာက
စာရိတ္တနှင့် သတ္တိ မျိုးဆက်သစ်
ဒါပေမဲ့ “သတ္တမိရှိတဲ့လူကောင်း” ရယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူး။
မိန်းကလေးတွေကို “အားနွဲ့သ”ူ လို့ အောက်မေ့တက်ကြတယ်။
မကောင်းဘဲ ရဲနိုင်တယ်၊ မရဲဘဲ မကောင်းနိုင်ဘူး ၊
ခွန်အားသာ နွဲ့ချင်နဲ့မွယ် သတ္တိတော့မနွဲ့ ကြတာ အမှန်ပဲ ။
ဒါကြောင့် မင်းတို့လဲ ကောင်းချင်ရင် ရဲကြ။ မျိုးဆက်သစ်
တစ်ချောင်းကို မျိုးဆက်ဟောင်းမိခင်က အသက်စနွ့်ပြီး မွေးလိုက်ရတာလို့ဆိုသင့်တယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ - 11 -
mmcybermedia.com အရှုံးကို ရင်ဆိုင၀်ံ့ခြင်း (၁၉၂၀
မှ ၁၉၄၀ လောက်အထိ မြန်မာပြည်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သော အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အိုင်စီမက်စ်
၀န်ထမ်း နှစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းများတွင် ဘောလုံးပွဲနှင့် ပတ်သက်၍) မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ရဲရင့်ကြပါ၏။ သို့သော်
အရှုံးကိုရင်ဆိုင၀်ံ့သောသတ္တိ နည်းပါးကြသည် တဲ့။
ဘာမှမလုပ၀်ံ့ဘူး။
သတ္တိန့ပဲတ်သက်ပြီး
ဘာမှမလုပ၀်ံ့ရင်
ပြန်တယ်။ သူပြောတာက . . .
ရွှေ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၉၃။
ခင်ပနွ်းကောင်းတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလျှင် ပို၍ဆုံးရှုံး၏။
လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို သတ္တိနဲ့ ဖန်တီးထားတာ။
သတ္တိဆုံးရှုံးလျှင်ကား အားလုံးကုန်ပါလေပြီ တဲ့ ။
အမွေ စိတ်အား သတ္တိ
သက်မ့ပဲစ္စည်းနဲ့ရန်မဖြစ်ဘူး။
နောက်တော့ဘယ်သူန့မှဲရန်မဖြစ်ဘူး။
တိရစ္ဆာန်နရ့ဲ န်မဖြစ်ဘူး။
နည်းသွားတယ်။ တိရစ္ဆာန်တို့ ၊ ကလေးငယ်တို့ကို လိုအပ်လို့ဆုံးမရင်လည်း ရိုက်ဦး၊ နှက်ဦးတော့ အမျက်
ဒေါသနဲ့ ရိုက်နှက်ခြင်းမပြုတော့ဘူး။ မျိုးဆက်သစ်
mmcybermedia.com သတ္တိရှိရင် နေရာယူပါ
လောကကြီးမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာဟူသမျှဟာ “ကာယသတ္တိ၊ စာရိတ္တသတ္တ”ိ
သေရဲတာမှ သတ္တိ မဟုတ်ဘူး ။ နေရဲတာလည်း သတ္တိပါပဲ ။
နှစ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေ ဖန်တီးခဲ့တာတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလည်း သတ္တိကောင်းတဲ့ သူတွေ
သေရတာမှ ကြောက်စရာကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
နေရဲတာလည်း ကြောက်စရာကောင်းတာပါပဲ ။
နေရာရှိတယ်။ သတ္တိရှိရင် ရှေ့ တက်ပါ။ သတ္တိမရှိရင် နောက်ဆုတ်ပါ။ နေရာဖယ်ပေးပါ။ သစ်သားထဲကို
သံချွန်အတွက် နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါ။ မင်းဟာ မာသလား၊ ပျော့သလား။ မာရင်
သတ္တိကောင်းရမယ်။ ဘယ်လိုသတ္တိလဲ ။ စိန်ခေါ်ရဲတဲ့သတ္တိ ဖြစ်ရမယ်။
နေရာယူပါ။ ပျော့ရင် နေရာ ဖယ်ပေးလိုက်ပါ။
ဦးနှောက် ခါးတောင်းကျိုက်တာနော်။ လူခါးတောင်းကျိုက်တဲ့သူ ကူလီပြဲ ဖစ်မှာပေါ့။ မျိုးဆက်သစ်
အဲဒီ ဦးနှောက်ခါးတောင်းကျိုက်တာမှာလည်း ရေရှည်ခံတဲ့သတ္တိမျိုးဖြစ်ရမယ်။
စိတ်အလို မလိုက်မှားမှု အမေရိကန်ခရစ်ယာန် တယ်ပြီးမှတ်သားဖို့ မှုပေတည်း။
ထိန်းသိမ်းနိုင်စမွ်းရှိပါစေ၊
အဲဒီ သတ္တိကို “ဇွ”ဲ လို့ခေါ်တယ်။
ပြောဖူးတဲ့စကားလေးဟာ စိတ်အလိုကို ပညာတက်
အဲဒီဇဲကွဘယ်မှာပြန်ဖြစ်သလဲဆိုရင် ခုနကပြောခဲ့တဲ့ ကြီးပွားရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်၊
အဲဒီ ဥစ္စာကနေ ဇွဲကို ပြန်ထိန်းတယ်။
ပေတည်း။ ထိုအချက်ကင်းမဲ့နေပါလျှင် အခြားဘာတွေကိုပဲ တတ်နေနေ အချည်းအနှီးသာတည်း” တဲ့။
သင့်ဘ၀၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၉၄
mmcybermedia.com စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံခြင်း
လုပ်ရတဲာကတော့ စိတ်ရဲ့ အလိုဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်ရတာ၊ မွေ့လျော်မှုကို စွန့်ပစ်လိုက်ရတာ၊ ဒါ့ကြောင့် ရေဆန်ကိုလိုက်ရတာပဲ။ “ရေစုန်အပေါင်းအသင်း” တွေကိုရှောင်ပြီး “ရေဆန်အပေါင်းအသင်း” တွေနဲ့ တွဲဖက်
ကြီးပွားအောင်မြင်ချင်တဲ့သူဟာ “စိန်ခေါ်ခြင်း” ကိုလက်ခံနိုင်ရတယ်။ စိန်ခေါ်ခြင်းကို လက်ခံနိုင်တဲ့
သတ္တိမရှိရင် မကြီးပွားချင်န့။ဲ စိန်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာကို လက်ခံနိုင်တဲ့သတ္တိရှိမှ ကုန်ကုန်ပြောလိုက်မယ်
ဓားသွေးတယ်ဆိုတာ ကျောက်တုန်းပေါ် သွေးရတာ၊ ကတ္တီပါပေါ်သွေးလို့ ဓားထက်တာ မဟုတ်ဘူး။ စိန်ခေါ်တာကို
လက်ခံနိုင်မှ အောင်မြင်တာ၊ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ ရှိရင်တိုက်ပွဲ
ငယ်ငယ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခိုင်းပါ
ဘာတိုက်ပဲမွှမရှိဘဲနဲ့ “ငါအောင်မြင်တယ်“ ဆိုရင်အရှုးဖြစ်နေမယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မခိုင်းရင် ကြီးလာရင် သူများခိုင်းတာ ခံရတတ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်
ကာလပတ်လုံးလောကကြီးကို မအောင်နိုင်ဘူးဆိုတာပုံသေ ယုံပါ။
တညူညူနဲ့ “ငါတော့ကံဆိုးတာပဲ” လို့အောက်မေ့နေရင် အဲဒီလူ တကယ်ကံဆိုး
စိတ်ပျက်ပေမယ့် လက်တော့မပျက်လိုက်ပါနဲ့ ၊
အောင်မြင်မှု ဘယ်တော့မှမရဘူး။ ထွက်ပြေးတဲ့ကောင် ဘယ်တော့မှနိုင်ရိုး မရှိဘူး ။ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ကောင်မှ
“စိတ်ပျက်လက်ပျက်” ဆိုတာမျိုးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ၊
ဆိုလိုတာက လေ့ကျင့်ကြိုးပမ်းနေမှုကို လျှော့မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ စာပေထဲကလူငယ်သမိုင်း
သရဖူ၊ ဇွန်၊ ၉၄
ရေစုန် ရေဆန် စိတ်ဟာ မကောင်းမှုမှာ မွေ့လျော်တယ်လို့ဆိုခ့တဲယ်မဟုတ်လား။ မကောင်းမှုဘက်ကို လိုက်သွား တာဟာ “ရေစုန”် မှာအလိုက်သင့်မျောပါသွားတာ မဟုတ်လား။ ဘာမှမပင်ပန်းပါဘူး။ ကောင်းရာကောင်းမှုကို - 14 -
mmcybermedia.com အားဆိုတာ ထုတ်မှထွက်တာ
အားဆိုတာ ထုတ်မှထွက်တာ ၊ အားမထုတ်ရင် အားမထွက်ဘူး
ယောင်္ကျားကောင်းတို့မည်သည် ဆုမတောင်းရဘူး၊ ဆုပန်ရတယ်။ မင်းတို့ယုံကြည် ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားရှေ့မှာ
တသက်လုံး အားနည်းပျော့ညံ့သူ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
တဆင့်မြင့်တဲ့မျိုးဆက်သစ်ကို ထူထောင်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားကောင်း (မိန်းမမြတ်) ဖြစ်အောင် ဒီကနေ့ကစပြီး သူတို့ကလေးတွေရဲ့ စာ
မဖြစ်မနေအသက်ပေဲသသေ လို့သစ္စာပြုဝံ့သလား။
သရဖူ၊ သြဂုတ်၊ ၉၄
နှုတ်ကမြွက်ပြီးဆုပန်ဝံ့သလား။ အဲဒီ ပြဒါးတိုင်န့မဲင်းရဲ့  ဆန္ဒပြင်းအားကို တိုင်းတာကြည့်ပေတော့ကွာ။
ဘ၀တစ်ခုလုံးဟာ ကိုယ်လိုချင်တာရဖို့နဲ့ ၊
“ဇွ”ဲ ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး၊ ကြာရှည်ခံနိုင်တဲ့ သတ္တိပါ။
သတ္တိများတဲ့လူက ကြာရှည်တောင့်ခံနိုင်တယ်။ လူငယ်နှင့်ရသစာပေ
မြန်အောင် ဟောပြောပွဲ (၈၇)
ကိုယစ့်ိတ်ထဲမှာ၊ ဘ၀မှာတိုးတက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိဌာန်မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး တိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်
“နုခြင်းသည် ရင့်ခြင်း၏ အကြောင်းတည်း” ဆိုတဲ့ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သြ၀ါဒစကားလိုပေါ့
ပြင်းပြင်းထန်ထန်မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး မင်းဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူး။ ဒါကိုပုံသေ ယုံပါ။
၊ မရင့်သေးခင် နုရမှာပဲ၊ မနုဘဲနဲ့ ရင့်ချင်လို့မရဘူး။ ဘုရားတည်တာမှာ ထီးတော်ကစပြီး တည်လို့မရနိုင်သလို အမွေ
တူးလို့မရနိုင်ဘူး။ ဘယ်နေရာမှာမဆို အစဆိုတာရှိတာ
ချည်းပါပဲ။ ကျွဲတောင်မှ မွေးကတည်းက ချိုပါနေရင် မွေးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်ရမှာပေါ့။
ထူထောင်သွားမယ်ဆိုရင် နုရာကရင့်လာကြမှာ ယုံမှားစရာ မရှိပါဘူး။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါပဲဟု ဖြစ်လာလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် မိမိကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ မျိုးဆက်သစ်
မိမိအားခေါင်းဆောင် တင်မြှောက်ထားသူတို့၏ (၀ါ) နောက်လိုက်တို့၏ ဘ၀သာလျှင် မိမိဘ၀
ကိစ္စကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်လေပြီဟု သဘောထားနိုင်မှသာလျှင် တကယ့်ခေါင်းဆောင် ကောင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါ
မြားကိုလေးပေါ်တင်ပြီး ပစ်လိုက်ရင် နောက်ကိုပြန်မလှည့်တော့ဘဲ တုံ့ဆိုင်းခြင်းမရှိ ရှေ့သို့ပြေးဘိ သကဲ့သို့
စစ်မ့သဲူရေဲကာင်း(ရသစာတမ်းငယ်)
ဘယ်မျှခက်ခေဲသာ အရာကြီးဖြစ်ပါစေ အောင်မြင်နိုင်မည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေဝတ်မှုန်၊ နိဝုင်ဘာ၊ ၉၃
နှလုံးသားကို လေးပေါ်တင်၍ပစ်သောအခါ သင့်ဘ၀စရိုက်ကြမ်းခြင်းနှင့် စရိုက်ပျက်ခြင်း၊
ဖြစ်ကြရသည်မှာ ဓမ္မတာဟု ဆိုရမည်ထင်ပါသည်။
လုတာ ယက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ထစ်ခနဲဆိုရင် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး တဆုံးတဆလုပ်ပစ်လိုက်တာမျိုး၊ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာ အသုံးချလိုက်ရင် ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်သွားတာ။
စစ်မ့သဲူရေဲကာင်း (ရသစာတမ်းငယ်)
သရဖူ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၉၅
ဆောင်မျိုး တစ်ချီမွှေလိုက်ပြီဆိုလျှင် နောက်ဆက်ခံရမည့် မင်းဧကရာဇ်တို့အဖို့ ဖာလို့ထေးလို့ မဆုံးနိုင်အောင်
စရိုက်ကြမ်းတာနဲ့ စရိုက်ပျက်တာ တော်တော်လေးကို ကွာတယ်ကွ။ ဆိုလိုတာက ခိုးတာ၊ ၀ှက်တာ၊
စံမြန်းလျက်မိမိကိုယ်ကိုအမှုသည် တစ်ဦးအဖြစ် ခံယူ၍ တရားသူကြီး မဟာပညာကျော်ထံ အပ်နှံနိုင်စမွ်း
ကလေးတွေ ရှိတာပါပဲ။ သို့သော် မူလကကြီးပွားချင်တဲ့စိတ်ရှိထားရင် ရောက်တဲ့နေရာမှာ တနည်းနည်းနဲ့
ရှိပေသော ဘုရင်မင်းမြတ်၏ ‘စိတ်နှလုံးတော် ရတနာ’ သည်ကား ‘ရတနာထက်က ရတနာ’ ဖြစ်ပါပေသည်။
ကြီးပွားအောင် လုပ်လာမှာပဲ။ အဲဒီ ကြီးပွားချင်တဲ့စတ်ိသာလျှင် အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ရတနာထက်က ရတနာ (ရသစာတမ်းငယ်)
ရည်မှန်းချက် (သင့်ဘ၀၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၉၄)
ရွှေဝတ်မှုန်၊ မတ်၊ ၉၄ - 16 -
mmcybermedia.com အတ္ထုပ္ပတ္တိ ပြုတယ်ဆိုတာ
ကြိုးပမ်းဆောင်ရက်ွနိုင်သူတို့ကိုသာ မြန်မာလူမျိုးတို့ကပညာရှိ ဟုသတ်မှတ်တက်ကြသည် ဟုထင်မိ ပါသည်။
မွေးလာရုံ၊ သေသွားရုံန့ေဲတာ့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ အတ္ထုပ္ပတ္တိတစ်ခုရယ်လို့ ရေးကြီး ခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး
(သို့မဟုတ်)ဆိုးအောင် ထူးထူးခြားခြားလုပ်ခ့လဲို့သာ မှတ်တမ်းတင်ခြဲ့ ကတာပါပဲ။
ဥသာ၊ နိဝုင်ဘာ၊ ၉၀ သင်္ဂါရ၀သုတ်
စံပယ်ဖြူ၊ ဧပြီ၊ ၈၆
လက်ထဲ ပြန်ရောက်ဦးမှာပဲ။ သည်လိုပြောကြတော့ ကျွန်တော်ကရောက်ရောက်ပေါ့ ။ ဘာဖြစ်လဲ ပြန်ယူပေါ့ ။ ဤသို့ချည်း ပြန်ပြောခဲ့ပါသည်။
တာဝန်သိစိတ်ရှိတဲ့လူတွေ ၊ တာဝန်ထမ်းတတ်တဲ့လူတွေ တာဝန်ကိုထမ်းနိုင်လာစမြဲပါပဲ။
ငါတို့ဘိုးဘေးများသည် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် လူမျိုးခြားများထံ ပါးရိုက်ခံပြီးစစ်ပညာကို သင်ယူ
တာဝန်ထမ်းနိုင်တဲ့လူတွေကို လောကကြီးကလည်းတာဝန်ကို ယုံကြည်အပ်နှင်းစမြဲပ။ဲ
ခဲ့ကြပါသည်။ ငါတို့သည်လည်း မည်မျှပင်အောက်ကျ နောက်ကျခံရစေဦးတော့ ကုန်သွယ် စီးပွားပညာ
လောကကြီးက ယုံကြည်အပ်နှံခြင်းခံရသူတွေဟာ ကြီးမြင့်လာစမြဲပ။ဲ
ရပ်ကြီးကို ရအောင်သင်ယူပြီး နိုင်ငံတော်ကို အလုပ်အကျွေးပြုမည်ဟု သဘောထားသင့်ကြပါသည်။
မိမိအတွေ့အကြုံ ၊ သူတစ်ပါးတို့၏အတွေ့အကြုံတို့တွင် အတွေးအကြံပြုပြီး
ငါချမ်းသာရမည်ဟူသော စိတ်နှင့် မကြိုးစားပါနှင့်၊
ငါဟာ မုချ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမည်ဟူသော စိတ်နှင့် ကြိုးစားကြပါ။
လူလည်းချမ်းသာပါလိမ့်မည်။ စိတ်လည်း ချမ်းသာပါလိမ့်မည်။ - 17 -
mmcybermedia.com အများလည်း ၀ပါလိမ့်မည်။
ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်နေပြန်သည် ကိုတွေ့ရပါသည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ။
ဖူးသစ်ဝေ မိုးကုတ်မြို့က ရတနာ
၀မ်းတစ်ထွာ ခေါင်းဆောင် ကုန်စည်များကို ခေါင်းဆောင်ဟုပင်
မင်းတို့မိုးကုတ်က ထွက်လိုက်တဲ့ ရတနာတွေကတော့ အံ့သြလောက်အောင်ပါပဲ။
နေသောကြောင့် ၀မ်းတစ်ထွာ ဟူသမျှတို့၏ခေါင်းဆောင်။
ဘာဘာညာညာ မသိပါဘူး။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ။
လူတွေလည်းချမ်းသာကြမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့မြို့က ထွက်သမျှရတနာတွေထဲမှာ တန်ဖိုး အကြီး ဆုံး ရတနာလို့ ထင်မိတာကတော့ ကျေးဇူးရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးပဲ။
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကြောင့် ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေကိုတော့ အမြို့ မြို့ အနယ်နယ်မှာတွေ့နေရတာ အမှန်ပ။ဲ
တကယ့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လိုလျှင် ပထမအဆင့်မှာ ရလေလိုလေ
တရိပ်ရိပ်တက်လာတတ်သောလောဘကို သတိတရလှည့်လှည့်ကြည့်ပြီး ဇက်သတ်ဖို့လိုသည်။
ဥဿာ၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၉၁
မင်းတို့လည်း အားလပ်တဲ့ အချိန်ကလေးတွေကို အသုံးချပြီးလောကကို ချမ်းမြေ့စေမယ့် အလိမ္မာ
စမ်းရေတွင်း ကလေးတွေဖြစ်အောင် ကိုယ်စမွ်းနိုင်တဲ့ဘက်က ကြိုးစားကြပေတော့။ လူကြီး လူမိုက်တွေကို
တရားသူကြီးများ၊ ဆရာဝန်များ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ စစ်သည်တော်များစသည်စသည်တို့မှာလည်း - 18 -
mmcybermedia.com အတုမခိုးကြနဲ့။ လောကလူသားတွေက ကျေးဇူးတင်ကြရတဲ့ တွင်းထွက်ရတနာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်
လူရတနာလေးတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပေတော့။
လူသည် အတ္တကြီးမားသည်မှာမှန်ပါသည်။ သို့သော် မိမိအပေါ်မှီခိုလာသည့် ကိုးရာမဲ့သတ္တ၀ါများ
မမှန်ကန်သော စည်းရုံးမှု အခြံအရံနောက်လိုက်နောက်ပါ
တစ်ခါတစ်ရံ လူတွေညည်းတွား နေကြသလောက်ဆိုးသည်ဟု ကျွန်တော်မထင်ပါ။
(ရသစာတမ်းငယ်) ပေဖူးလွှာ ပေါများစေလိုသော
လှသော မွှေးသော ပန်း
သိမ်းသွင်းမိခြင်းသည် ရေရှည်တွင် မိမိကိုသာလျှင် ဒုက္ခရောက်စေတတ်ကြောင့်ကိုလည်း အင်္ဂုတ္တိုရ်ကပင်
လေသနည်း။ ဘယ်ပန်းငုံ ဘယ်လောက်ပလှဲလှ ၊ ဘယ်ပန်းပွင့်လေး ဘယ်လောက်ပေဲမွှးမွှေး လူသားတို့၏ နှလုံးသားထဲက ပွင့်လာသော ကရုဏာပန်းထက် လှနိုင် မွှေးနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်မထင်။
ဒဂုန်၊ စက်တင်ဘာ၊ ၈၆
သေတောင် မနှမြောဘူး တိရစ္ဆာန်တို့၏ ကရုဏာ
လောကကြီးမှာ ညံ့တဲ့သူတွေစောစောသေရင် နှမြောတယ်များထင်နေသလား။
တိရစ္ဆာန်များ လောက၌ပင်လည်း သူတို့မိဘကို အသိအမှတ်မပြုကြစေဦးတော့ သူတို့အပေါ် လုံးလုံး
လျားလျား မှီခိုနေသည့်ရင်သွေးငယ်များအတွက် အသက်စနွ့် ကာကွယ်ကြသည်ကို ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏ
တွေ့ကြရသည်။ သည်တော့ မျိုးနွယ်စုကြီးတစ်ခုလုံးမတိမ်ကော၊ မပျောက်မပျက်ရှင်သန်နေအောင် မျိုးဆက် သစ်ကလေးတွေကို ပိုပြီး ကြင်နာစောင့်ရှောက်လိုသည့် စေတနာဇောကို သဘာဝတရားကြီးက ဖန်တီးပေး ထားလေရော့သလားဟု အောက်မေ့ မိပါသည်။ မျက်လုံးတစ်စုံနှင့် နတ်ရုပ်တစ်ရုပ် (ရသစာတမ်းငယ်)ပေဖူးလွှာ - 19 -
mmcybermedia.com ပျိုမျစ်မစွမ်း၊ အိုမင်းမစွမ်း ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမိဘများကို
ရှင်ဘုရင်နဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်သူ ပျိုမျစ်မစွမ်းဘ၀တွင်
စွန့်ပစ်ထားကြမည်ဆိုပါလျှင် ခင်ပနွ်းယုတ်၊ လူမသမာမျိုးဆက်ဟုဆိုရပါတော့မည်။
အောက်တန်းကျဖို့ဆိုတာ ကြိုးစားနေဖို့မလိုပါဘူး၊ တစ်နေ့မှာ ငါအောက်တန်းကျရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြု
ပညာတက်ချင်တက်မယ်၊ ဘွဲ့ရချင်ရမယ်၊ အသုံးမကျရင် လူရာမ၀င်ဘူး။
ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မင်းဟာအမြဲတမ်း အသုံးဝင်နေအောင်လုပ်ပါ။
တချို့ ဆိုရင် ပညာမတက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူ့နည်းနဲ့သူအသုံးဝင်အောင်လပ်ုတယ်။
အဲဒါကြောင့် လူရာဝင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အသုံးဝင်အောင်လုပ်နေတာ။
တာဝန်မ့တဲ့သားသမီးရဲ့ မိဘဖြစ်ရတာ ငရဲ ၊
တာဝန်မ့တဲ့သားသမီးဖြစ်ရတာလည်း ငရဲပါပဲ။ စာပေထဲကလူငယ့်သမိုင်း
နနွင်မကင်းပုံ လူလောကကြီးက နနွင်းမကင်းပုံထောင်ထားသလိုပ၊ဲ
အများကြီးရှလို့မရဘူး၊
ဘ၀ဆိုတာအချိန်။ အချိန်မပါဘဲ ဘ၀ဖြစ်လို့မရဘူး ။ အမွေ
ဘ၀ကိုတန်ဖိုးထားရင် အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရတယ် ။ - 20 -
mmcybermedia.com အချိန်ကို ဖြုန်းပစ်လိုက်တာဟာ ဘ၀ကိုဖြုန်းပစ်လိုက်တာပဲ ။
လူလိမ်လူကောက် သူခိုးဓားပြများကလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က မရိုးဖြောင့်စေကာမူ ရိုးသားခြင်းကို နှစ်သက်
ကြသည်။သူခိုး၊ ဓားပြများသည် ပင်လျှင်လည်း သူတို့အချင်းချင်းရိုးသာသူကို အပေါင်းအဖော်ပြုကြမြဲဖြစ်သည်။
မနာလိုခြင်း မဖြစ်သူ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုဆိုတဲ့
ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ နုံခြင်း၊ အခြင်းမဟုတ်ချေ။ ပညာမဲ့ခြင်းမဟုတ်ချေ၊ ရိုးသားခြင်း ဆိုသည်မှာ
စကားပေပဲ။ ဒါပေမယ့် မိဘမေတ္တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီစကားဟာ မှားသလို ဖြစ်လာ
ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟူသော ဂုဏ်ကို ရယူနိုင်ရန်လွယ်ကူလှသည် မဟုတ်ချေ။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကြောင့် မိမိဒုက္ခ
ပြန်တယ်။ မိဘတွေဟာ သားသမီးက ကိုယ့်ထက်မြင့်သွားလေလေ ဂုဏ်ယူလေလေပဲ။
မရောက်ရအောင် ရှောင်တိမ်းကာကွယ်တက်သော ပါးနပ်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အတူ မျိုးဆက်သစ်
ရိုးသားမှု ကြောင့် လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့် သတ္တိမရှိဘဲ ရိုးသားလို့မရနိုင်ချေ။
အခိုင်းနှင့် အခိုင်းခံ လောကကြီးမှာသူများခိုင်းတာကို ကျိုးနွံခံယူမှ ကိုယ်ကသူများကို ခိုင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တာ။
မြန်မာဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိတယ် . . လူတော်လူကောင်း
သူများဖိနပ်ကိုကိုင်မှ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုကိုင်မယ့်သူပေါ်တယ် တဲ့။
လူတော်လူကောင်း၊ လူကောင်းလူတော် စသည်ဖြင့်ဆိုကြသည်။
တော်သည်ဆိုသည်မှာ လူစမွ်းဥာဏ်စမွ်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ လူသည် မိမိတစ်ဦးတည်း မနေနိုင်သောကြောင့် အများနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ ပူးပေါင်း
နေနိုင်ရေးအတွက်ပေါ်ပေါက်လာရသော လိုလားအပ်သည်ချု့ပ်ချယ်မှုများ ဖြစ်သည်။ စာစီစာကုံး - 21 -
ရိုးဖြောင့်မှု အရင်းအနှီး မကောင်းတာကို အကျင့်လုပ်ရင် မကောင်းကျင့် ပါသွားတာပဲ၊
ကောင်းတာကိုလည်း အကျင့်လုပ် ယူရတာပဲ၊ ကျင့်ယူရင်ရတယ်။
ရိုးဖြောင့်မှုအရင်းအနှီးကိုတော့ဖြင့် မည်သူမဆိုလိုချင်လျှင်ရနိုင်ပါသည်။ မျိုးဆက်သစ်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အများမိုးခါးရေသောက်၊ ကိုယ် သောက်တဲ့ ၊ အူမ တောင့်မှ သီလစောင်နို့င်မည် တဲ့ ၊
ဤစကားပုံများကို မည်သို့ သုံးစွဲနေကြသနည်း။ မဟုတ်တာလုပ်သည့်
ကျွမ်းကျင်မှုစမွ်းရည်တို့တွင်
မတူနိုင်ကြပါ၊ အကန့်အသတ်ရှိနိုင်ကြပါသည်၊ သို့သော် ရိုးဖြောင့်မှုတွင်ကား မည်သူမဆို
အစွမ်းကုန်ရိုးသားနိုင်ခငွ့် ရှိကြပါသည်။ ထိုရိုးဖြောင့်မှုဂုဏ်ကို ရအောင် ကြိုးပမ်းလျက် အရင်းအနှီး ထူထောင် ကိုယ့်ဘာသာလိပ်ပြာလုံအောင်
နိုင်ပါလျင် ကြာလေ အမြတ်ထွက်လေ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
တွေ့ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်တာလုပ်မိလျှင် လိပ်ပြာငယ်ကြရပါမည်။ လိပ်ပြာမလုံ ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။ လိပ်ပြာလုံအောင်
အထက်တန်းကျလိုလျှင် မပြည့်စုံသူစိတ်မျိုးမမွေးပါနှင့် ။
ကျွမ်းကျင်သည်ဟူသော ဂုဏ်မျိုးကို မက်သင့်ပါသည်။
တာမွေမြို့နယ် မဂ္ဂဇင်း၊ ၉၄
mmcybermedia.com ချစ်နေရုံနှင့် ပြီးသည်မဟုတ်
သားသမီးများက မိဘအပေါ်မှာ ဪ
သူတို့ဟာဖြင့် ငါ့မိ၊ ငါ့ဖပါကလားဆြို ပီး ချစ်နေရရုံနဲ့
လူငယ်တွေက သူတ့ရို့ဲ
ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ သြော် ငါ့မိ ငါ့ဖများဟာဖြင့် ဆင်းရဲသည် ချမ်းသာသည်ကို အပထား အရပ်ရပ်သော
လက္ခဏာများနဲ့ သားသမီးကို ဂုဏ်တက်စေသည်တကားလို့ ကြည်ညိုရမှကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုပဲ
သားသမီးများအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီးရယ်လို့ ချစ်နေရရုံနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ သြော် ငါ့သမီးဟာဖြင့် မိဘရဲ့ ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရှာပေတကား
မဟုတ်လား။ အရှက်နှင့် အသက်
အရေးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆိုလိုက်လျှင် အသက်ကိုစနွဝ့်ံကြသော လူငယ်တို့သည် ရုပ၀်တ္တုကိုမက်မော
သရဖူ၊ ဇွန် ၉၄
သောကြောင့် အရှက်ကိုစနွ့်ကြသည့်ဘ၀သို့ သက်ဆင်းကြတော့မည်လော ဆိုတာမျိုးကို ကျွန်တော်တွေးမိ
ပညာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် အတွေ့အကြုံမှ အတွေးအကြံသာလျှင်မက အကျင့်အမှန်ကိုလည်း
(အသက်ကိုစနွဝ့်ံ့ကြသောလူငယ်တို့သည်)
အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေးအကြံ (ဥဿာ၊ နိဝုင်ဘာ၊ ၉၀)
ပြဿဒါးနှင့် ရက်ရာဇာ ကိုယ်ရပိုင်ခွင့်မဟုတ်တဲ့
ပြဿဒါးပိုက်ဆံကို မရှာနဲ့။ ရက်ရာဇာ ပိုက်ဆံကိုရှာပါ။ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ရက်ရာဇာပိုက်ဆံကိုရမှ မောင်ရင်လည်းရာဇာဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။ နို့မဟုတ်ရင် ဘ၀လည်း ပြဿဒါးဘ၀ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့။ အမွေ - 23 -
mmcybermedia.com ခိုးတာဟာ ခိုးတာပါ
အပေါင်းအသင်း သန့်ရှင်းမှု ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုသည်
ဟိုအရင် လက်ဝဲ၀ါဒ အဲ ပစ္စည်းမဲ့တော်လန်ှရေးဆိုတာမျိုးတွေ ရေပန်းစားနေစဉ်ကာလက အရင်းရှင် စနစ်ဆိုးကြီးကြောင့်
အဲဒီသူခိုးကိုပသဲနားလာအောင်၊
စာစီစာကုံး ကာကွယ်ထိုက်သူကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
အကာအကွယ်ပေးအပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သတ္တိရှိတဲ့လူတိုင်း၊ စွမ်းအားရှိတဲ့လူတိုင်းက ကာကွယ်
ရေးတာမျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မကြိုက်ဘူး။ ဘယ်သူခိုးပဲခိုးခိုး၊ ခိုးတာဟာ
ကြရတာဟာ လူ့ကျင်ဝ့တ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။
ခိုးတာပါပဲ။ စနစ်ကြီးကြောင့် ခိုးခြင်းကို ကျူးလွန်ရတာကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးချင်ရေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခိုးတာကို
တရားသယောင်ယောင်မျိုးတော့ မရေးစေချင်ဘူး။ မိမိကိုယ်ကို မထိန်းသိမ်းသူ
မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုသူသည်၊ သူတစ်ပါး၏အကျိုးစီးပွား၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဖျက်ဆီးသည်။
ကိုယ်မကြိုက်တာကို ကိုယ်ကလည်း မလုပ်နဲ့ပေါ့ ကိုယ့်လုပ်အားခကို ခေါင်းပုံဖြတ်တာကို
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှုသည်လည်း စာရိတ္တကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးလေသည်။
ကြုံခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒါတွေလည်း ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ၀တ္တုတွေဘာတွေ ရေးတဲ့အခါကျတော့ ၀တ္တုဆရာက
သင့်ဘ၀၊ ဇွန် ၉၅
ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ လောကကို စောင့်ရှောက်သော အရာ
ရတာမဟုတ်လဲ ဘာကြောင့်ယူချင်ရတာလဲ။ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သူဟာ ကိုယ်ရပိုင်ခွင့်မရှိတာကိုလည်း မယူဘူးဆိုတဲ့ စာရိတ္တသတ္တိမျိုးမွေးနိုင်ရမှာပေါ့။
လောကကြီးကို ပြိုကွဲပျောက်ပျက် မသွားရလေအောင် ထိန်ကွပ်ပေးထားသည့်အရာမှာ ကိုယ်ကျင့် တရားပင်
ဖြစ်သည်။ မြန်မာနှင့် သံဃာ ( ရွှေတိဂုံ ရေကြည်တော်အသင်း မဂ္ဂဇင်း )
ရွှေ၊ သြဂုတ်၊ ၉၃ - 24 -
mmcybermedia.com အကျိုးအကြောင်းနှင့် ဆန္ဒစွဲ
ကျွန်တော်တို့ ဂျီသြမေထရီပညာရပ်ကို သင်ကြားခဲ့ရခြင်း၏ ပဓာနရည်ရယ်ွချက်မှာ လက်သမား လုပ်စားဖို့မဟုတ်။
ကြီးကျယ်၍ ထည်ဝါခမ်းနားလှသော စကားလုံးကြီးများသည် လူငယ်များ၏စိတ်ကို အလွန်တက်ကြွ
(မိမိဆန္ဒစဲကွို ဘေးချိတ်ပြီး) အဆိုတစ်ခုမှန်ကန်ကြောင်း လက်ခံတတ်ဖို့ စိတ်ကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု
ရေးသားလိက်ုရပါသည်။
ကြုံခဲ့ရပုံများ အကျိုးအကြောင်းဆိုသည့် ကိစ္စ
အတွေးရဲသည်ဟူသော စကားမျိုးကို ကျွန်တော်အထင်မကြီးပါ။ အတွေးစနစ်ကျသည် ဟူသော
အများကြီးဖတ်ပြီး နည်းနည်းမှမစဉ်းစားရင် ဗဟုသုတများတဲ့ လူညံ့တစ်ယောက်ပြဲ ဖစ်နေမှာပေါ့။
အဖြစ်မျိုးကိုသာ အထင်ကြီးပါသည်။ စနစ်မကျသောအတွေးရဲခြင်းမျိုးသည် တွေးသူ၊ ရေးသူ ကိုသာမက
အများကြီးစဉ်းစားပြီး ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကောင်း နည်းနည်းလောက်ကိုဖတ်ပြီး
ဘေးလူကိုပါ အန္တရာယ် ဖြစ်စေတတ်သည်ဟု ကျွန်တော် ယြုံ ကည်ပါသည်။
ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက် (ဆရာ မြိုမ့  မောင်၏ သြ၀ါဒ)
ပေဖူးလွှာ၊ မေ၊ ၈၇
ဆရာမြို့မမောင်နှင့် ကျွန်တော် ခဏလောက် ရပ်ပြီး စဉ်းစားခြင်း
မက်လုံးပေးလိုက်၊ လှန့်လိုက်နှင့်လုပ်စားကြသူများ၏ ခေတ်မှာ မကုန်နိုင်လောက်အောင်ကို ဖြစ်နေပါ တော့သည်။ ရွှေကို ပွားပေးမည်ဟု အယုံသွင်းပြီး ရွှေကို လိမ်ယူသွားတာတွေ၊ ပျောက်စေဆရာ ဆိုတာမျိုးတွေ မကြာခဏ ကြားနေရပါသည်။ ဤသည်မှာ ခဏလောက်ကလေး ရပ်ပြီး ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်လေ့ မရှိသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆန္ဒစွဲကင်းသော စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမျိုး ရနိုင်ရန်မလွယ်လှကြောင်း ကျွန်တော် သိပါသည်။ - 25 -
mmcybermedia.com သို့သော် ခဏလောက်ရပ်ပြီး စဉ်းစားလိုက်ချင်သည့်အလေ့မျိုးကို ထူထောင်နငိုလျှင်တော့ အလွန်ကောင်း
ကိုယ်ညံ့တာကို သိအောင်ကြိုးစားရမယ် ကိုယ်ညံ့နေတာကို ညံ့မှန်းမသိရင် ဘယ်တော့မှ မတိုးတက်ဘူး။
ရွှေ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၉၃ ရှက်စရာကို ရှက်တတ်ရမှာပဲ
သေရမှာထက် ကြောက်တဲ့ ကိစ္စ အချို့ကိစ္စများကို ယုတ္တိရှိကြောင်း၊
သမိုင်းကို ပြန်ပြီး လေ့လာလို့ ရှက်စရာတွေ့ရင်
ကိုယ့်လူမျိုး ညံ့ခ့တဲာတွေ ပြန်တွေ့ရင် ရှက်ကို ရှက်ရမှာပဲ။
အချို့သောပညာရှိကြီးများက လူတွေ အကြောက်ဆုံးသော အရာမှာစဉ်းစားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြဲ့ ကခြင်
ရှက်စရာကို ရှက်ရမှန်းကို မသိတာက ပိုပြီးရှက်စရာ ကောင်းတယ်၊
အဲဒီလို ညံ့တဲ့အဖြစ်မျိုးကို နောက်ထပ်မရောက်ရအောင်
စဉ်းစားရမည်ကို သေရမှာထက်ပိုကြောက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မစဉ်းစားဘဲ သေကုန်ကြခြင်း ဖြစ်သည်
တစ်မျိုးသားလုံး တက်ညီလက်ညီကြိုးစားကြရမှာပဲ မဟုတ်လား။
ဟုရက်ရက်စက်စက် ပြောခဲ့ခြင်းမှာ မလွန်လှဟုအောက်မေ့မိပါသည်။
အောင်သင်း၊ စဉ်းစားမိသမျှ အောင်သင်း စဉ်းစားမိသမျှ
ရွှေ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၉၃ အကောင်းဆုံး ဝေဖန်ရေး
ရွှေ၊ စက်တင်ဘာ၊ ၉၃
ထိုဝေဖန်ရေးကို ပြုလုပ်ကြပါဟု လူငယ်များအားတိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။ အကောင်းဆုံး ဝေဖန်ရေး (သရက်မြို့နယ် မဂ္ဂဇင်း၊ ၉၅)
mmcybermedia.com ပြောသူနှင့် ပြောသည့်စကား
လက်ခုပ်သြဘာ မျှော်လင့်မှု ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ချီးမွမ်းမြှောက်စားမှုဟူသော ဆုလာဘ်ကို မျှော်ကိုး
သဖြင့် မိမိ၏ ဦးနှောက်နှင့် နှလုံးသားကို သစ္စာဖောက်ခြင်း မဖြစ်စေအပ်။ မျိုးဆက်သစ်
စံပယ်ဖြူ၊ မတ်၊ ၈၆
စကားချေတင် ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် ဆွေးနွေးကြပြီဆလျှိုင် အလင်္ကာစသည်တို့ကို ပဓာနမထားဘဲ
အတိုဆုံး အရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်သာ ပြောဆိုဆွေးနွေးအပ်ပါသည်။
အမှန်တရားကို ရန်သူ မဟုတ်ပါ
ပေဖူးလွှာ၊ မေ၊ ၈၆
စင်ကြယ်သောသူတို့ အရေးကြီး ကြိုးစားကြသည်မှာ အမှန်တရားကို ပေါ်လွင်အောင်တင်ပြရန်သာ ဖြစ်သည်။
တွေမှာကျတော့မှ တွေးမိတတ်ကြတာ။ သူများ ထီပေါက်ရင် ကိုယ်လည်း ပေါက်နိုင်တယ်လို့တွေးတယ်၊ ထီထိုးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများ ကားတိုက်ခံရရင် ကိုယ်လည်းကားတိုက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့
ဘုရားရှင်ကတော့ အကြောင်းအရာအားဖြင့် ကိုယ့်ဘက်ကမှန်နေသည်ပထဲားဦးတော့ နိုင့်ထက်စီးနင်း သူများဖြစ်ရင် (တစ်ခါတုန်းက တပည့်တွေ)
ပြောဆိုဆွေးနွေးတတ်သူတို့ကို မဆွေးနွေးသင့်သောသူများဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ ကထာဝတ္တု စံပယ်ဖြူ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၈၅
mmcybermedia.com ကြောက်တတ်တဲ့ ဦးနှောက် ဘ၀ကို
အမှတ်မ့ကဲုန်ဆုံးသွားစေတဲ့
စာမျိုးတွေကိုသာ ဖတ်ချင်ကြတယ်။ စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့စာမျိုးတွေကို သိပ်မဖတ်ချင်ကြဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်က “စိန်ခေါ်ခြင်း” ကို လက်မခံနိုင်ကြဘူး။ သူတို့ဟာဖျော်ဖြေမှုကိုသာ အစဉ်မတ်ွသိပ်တောင့်တ နေတတ်ကြတယ်။ မျိုးဆက်သစ် တိုးတက်ရစ်ဖို့ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးချိန်တွင် သင့်၌ပြောစရာစကား တွေးစရာ အတွေး ရေးစရာ အကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင့်၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်များကို ကျန်သည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ချရေးကြည့်စမ်းပါ ….. ။
ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ခြင်းဟာ လုပ်ဆောင်ဖွယ် ကိစ္စတော်တော်များများထဲက ကို KTL (mmcybermedia.com) မှ စာရိုက်ပေးပါသည်။ အသိပညာနှင့် ထ...